Home » Entries posted by Super Admin (Page 3)
Posted on November 29, 2017 by Super Admin and saved under Hollywood News, Wararka Maanta
Atariishada u dhalatay Mareykanka Rachel Meghan Markle ayaa waxay aqbashay inuu alkunto Prince Henry oo ah dhaxal-sugaha Boqortooyada Wales. Waana alkun yimid ka dib muddo hal sanno ah oo ay labadoodu wadaagayeen xiriir jaceyl. Xaflad aroos boqortooyo ah middii ugu sarreysay ayaa loogu qaban doonaa aqalka Windsor Castle sannadka soo…
Comments Off on Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Meghan Markle – Atariishada garoobka ah ee Africa xididka ku leh taasoo uu alkuntay Prince Henry! / Continue reading →
Posted on November 29, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Nolosha Jilaayaasha, Wararka Maanta
Katrina Kaif ayaa ku faani karta inay sameysay wax aysan sameyn atariisho kasta oo Bollywood ah taasoo ah inay la shaqeysay seddaxda Superstar ee hogaamiyaha u ah Bollywood Town Aamir Khan, Salman Khan iyo Shah Rukh Khan ama Seddaxda Khans. Kat ayaa filimka Tiger Zinda Hai ee 22ka bisha soo…
Comments Off on Katrina Kaif oo ka hadashay haddii si qorsheysan ay ula shaqeysay Seddaxda Khans & War wanaagsan oo usoo yeeray / Continue reading →
Salman Khan iyo Katrina Kaif ayaa waxay isku diyaarinayaan filimkooda Tiger Zinda Hai oo soo bixi doona December 22, 2017 waxaana filimkaan agaasimay Ali Abbas Zafar. Salman iyo Katrina ayaa waxay xalay ka qeybgaleen xafladdii International Film Festival of India weliba si wadajir ah ayey uga qeybgaleen, taasoo ka dhacday…
Comments Off on SAWIRRO: Salman Khan iyo Katrina Kaif oo gaar iskula baxay ka dib xafladdii IFFI 2017, Toloow maxay sameeyeen? / Continue reading →
Amitabh Bachchan, Akshay Kumar iyo Salman Khan waxay ka mid ahaayeen xiddigaha caanka ah ee Bollywood Town kuwaasoo joogay xafladdii International Film Festival of India 2017 illaa waqtigii gabagabada. Akshay Kumar ayaana si aan caadi aheyn u ammaanay Amitabh Bachchan intii ay xafladdaani socotay, xitaa wuxuu ku tilmaamay Big B…
Comments Off on Akshay Kumar oo adduunka hortiisa lugaha ku qabsaday Amitabh Bachchan si uu ixtiraam ugu muujiyo & Big B oo ka hadlay! / Continue reading →
Wiil u dhashay Masar oo toorreey ku dilay hooyadiis (Ogoow sababta ka dambeysa)
Posted on November 28, 2017 by Super Admin and saved under Arimaha Bulshada, Wararka Maanta
Wiil dhallinyar oo u dhashay dalka Masar ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu dilay hooyadiis. Shabakadda Dostor ee laga akhristo dalka Masar ayaa sharraxaad ka bixisay sababta uu wiilkaani u dilay hooyadiis. Magaciisa waxaa lagu soo koobay Mohammed. A, waxaana la xaqiijiyey inuu toorreey ku dilay hooyadiis ka dib markii uu…
Comments Off on Wiil u dhashay Masar oo toorreey ku dilay hooyadiis (Ogoow sababta ka dambeysa) / Continue reading →
Posted on November 28, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Nolosha Jilaayaasha, Wararka Maanta
Waa qeybtii labaad ee warbixintii aan kaga hadleynay xiddigaha caanka ah ee Bollywood kuwaasoo quraafaadka aaminsan. Waxaana xusid mudan inay liiskaan kasoo muuqan doonaan qaar ka mid ah jillaayaasha ugu magaca dheer Bollywood Film Industry kuwaasoo waxyaabo yaab leh ku saacsada. #7 HRITHIK ROSHAN HR waa mid ka mid ah…
Comments Off on Xiddigaha Bollywood ee quraafaadka aaminsan, Hrithik dadka ayuu wax dheer yahay illaa Ranbir oo hooyadiis ku saacsada (Qeybta 2aad) / Continue reading →
Posted on November 28, 2017 by Super Admin and saved under Bollywood News, Wararka Maanta
Qeybtii labaad ee filimka shactarada ah No Entry ayey Bollywood-ku sameyn doonaan, waxaana loo bixiyey magaca No Entry Mein Entry. Salman Khan ayaa diiday inuu ka qeyb noqdo mashruucaan, inkastoo ay xaqiiqadu tahay inuu hogaamiye ka ahaa qeybtii koowaad ee filimka No Entry. Warbaahinta India ayaana sheegeysay in lagu bedeli…
Comments Off on Arjun Kapoor oo markale la shaqeyn doona adeerkiis Anil Kapoor, wuxuuna qaatay booskii Salman Khan! / Continue reading →
RASMI: Prince Harry oo alkuntay atariishada u dhalatay Mareykanka Meghan Markle & Xilliga uu arooskoodu dhacayo!
Posted on November 28, 2017 by Super Admin and saved under Hollywood News, Nolosha Jilaayaasha, Wararka Maanta
Ugu dambeyn, Aqalka Kensington Royal ayaa xaqiijiyey inuu Prince Harry alkuntay atariishada garoobka ah ee u dhalatay Mareykanka Meghan Markle, iyadoo bayaan rasmi ah lasoo saaray. Wararka xanta ah ee la xiriira alkunka Prince Harry iyo Meghan Markle ayaa baraha bulshada heystay tan iyo markii ay labadoodu si wadajir ah…
SAWIRRO: Nin Hindi ah oo madaxa ka jaray xaaskiisa, ka dibna u qaaday Saldhigga Boliiska, muxuuse u dilay?
Nin beerayeel ah oo u dhashay dalka India ayaa wuxuu seef madaxa uga jaray xaaskiisa, ka dibna inta madaxeeda oo go’an qaaday ayuu geeyey Saldhigga Boliiska – maxaa yeelay wuxuu ku qabtay iyadoo nin kale kula tumaneysa bartamaha mid ka mid ah beerihiisa. 38 sanno jirkaan oo lagu magacaabo Narayan…
Comments Off on SAWIRRO: Nin Hindi ah oo madaxa ka jaray xaaskiisa, ka dibna u qaaday Saldhigga Boliiska, muxuuse u dilay? / Continue reading →
Dhakhtar been abuur ah oo kufsaday in ka badan 100 haween ah, kana helay 85 kun oo dollars!
Boliiska dalka Japan ayaa xabsiga dhigay dhakhtar been abuur ah, kaasoo dumarka ku dura cirbado maandooriye ah ka dibna si sharci darro ah ugu galmooda. Dhakhtarkaan been abuurka ah ayaa lagu eedeeyey inuu si sharci darro ah ugu galmooday in ka badan 100 haween ah, isagoo ku duraya cirbado miyirka…
Comments Off on Dhakhtar been abuur ah oo kufsaday in ka badan 100 haween ah, kana helay 85 kun oo dollars! / Continue reading →